Ababhali be Martech zone yingqokelela yamashishini, ukuthengisa, ukuthengisa, kunye neetekhnoloji ezihlangeneyo zibonelela ngobuchwephesha kwiindawo ezininzi, kubandakanya ukuthengisa uphawu, ubudlelwane boluntu, ukuthengisa ngokucofa qho, ukuthengisa, ukuthengisa iinjini yokukhangela, ukuthengisa ngeselula, ukuthengisa kwi-Intanethi, i-ecommerce , uhlalutyo, ukusetyenziswa, kunye netekhnoloji yokuthengisa.
Naba ababhali abanikelayo ngoku:
Amanqaku akutshanje: Eyona nto igqwesileyo ye-WordPress SEO Plugin: I-Rank Math
Amanqaku akutshanje: Uqhuba njani iTrafikhi eyongezelelweyo kunye noguqulo oluvela kwimidiya yoluntu
Amanqaku akutshanje: Iindlela ezili-10 zokufumana abaPhembeleli abagqibeleleyo kwibhrendi yakho
Amanqaku akutshanje: Iindlela ezi-7 ze-DAM eziLungileyo zinokwandisa ukusebenza kweBrand yakho
Amanqaku akutshanje: Izixhobo ezisi-8 zoPhando lweNtengiso yeNtengiso eFanelekileyo kwiNiche yakho
UJonathan Low ngomnye woosomashishini abaziwayo baseDenmark kunye nababhali beshishini. U-Løw ungumseki we JumpStory, i-AI-based stock-photo platform ebizwa ngokuba yi "Netflix yemifanekiso." IJumpStory okwangoku inabathengi kumazwe angaphezu kwe-150 kwaye ikhula ngokukhawuleza.
Amanqaku akutshanje: Ulwakha Njani uphawu lweNqobo
UMax ngumseki kunye neCEO ye I-Spectrm -Iqonga lentengiso elingenakhowudi yentengiso yeebrendi ukuguqula abathengi kukhangelo, kwezentlalo, kunye nomboniso. Uhlalutyo lwe-Spectrm chatbot, izisombululo ezizenzekelayo zokuthengisa kunye nencoko ye-AI yenza kube lula ukwenza amava omthengi kwisikali.
Amanqaku akutshanje: Izifundo ezi-5 eziFundiweyo ngaphezulu kwezigidi ezingama-30 kuNxibelelwano lomThengi omnye ukuya komnye ngo-2021
URavi Swaminathan ngumseki kunye ne-CEO ye Umsebenzi womntu, iqonga loqeqesho lwedijithali lwexesha lokwenyani elidibanisa umsebenzi ngamnye 1: 1 kunye nenethiwekhi yehlabathi yabaqeqeshi phezu kwefowuni yevidiyo malunga nezihloko ze-1000 zomsebenzi wemihla ngemihla kunye nobomi bomntu.
Amanqaku akutshanje: I-TaskHuman: Iqonga loQeqesho lweDijithali yexesha lokwenyani
Intloko ye Admitad ConvertSocial. U-Ksana ube sisithethi kwiinkomfa ezikumgangatho wehlabathi malunga nentengiso edibeneyo kwaye unxibelelana nabathengi abangaphezu kwe-35,000 ye-Admitad ConvertSocial, ebandakanyekayo kushishino lokubloga, olumvumela ukuba ahlale enolwazi lweendlela zamva nje kwihlabathi labaphembeleli. Phambi kokujoyina iqela le-Admitad, u-Ksana ebesebenza kwintengiso edityanisiweyo kunye nokwenza imali kumxholo ngaphezulu kweminyaka esi-7, enceda ii-brand ezinkulu zivelise izisombululo zabo kwiinkonzo zohambo 'metasearch.
Amanqaku akutshanje: Amaqhinga ayi-7 aPhumeleleyo aBathengisi abaManyano baSebenzisa ukuqhuba iNgeniso kwiimpawu abazikhuthazayo.
UJodi Daniels nguMcebisi waBucala oSebenzayo (GDPR, CCPA, iMithetho yaBucala yase-US), iGosa laBucala leFractional kunye nomseki kunye ne-CEO ye Abacebisi beClover ebomvu. UJodi ukwangumamkeli wePodcast kunye neSithethi esiPhambili.
Amanqaku akutshanje: Kutheni Ishishini lakho kufuneka Lithathele ingqalelo ukuThotyelwa kweCCPA
UKyle ngumphuhlisi wesoftware kunye nomseki we Collabstr, iqonga lokudibanisa iibrendi kunye nabadali bomxholo, eyona ndawo yentengiso yehlabathi ukufumana kunye nokuqesha abantu abanempembelelo.
Amanqaku akutshanje: Uyisebenzisa njani iTikTok kwiNtengiso yeB2B
UAdam Ortman ngusekela mongameli ophezulu wokukhula kunye nokusungula izinto ezintsha Ijenereyitha yeMedia + Uhlalutyo, i-arhente yeendaba ehlangeneyo ngokupheleleyo. Ukudibanisa ishumi leminyaka yamava kwi-arena ye-arhente yeendaba kunye nesiseko semfundo kwi-psychology yabathengi, u-Adam uvavanya i-digital, intlalontle, iselula, kunye ne-e-commerce platforms kunye neendlela zokumisela ukuba banokuzisa njani ixabiso kutyalo-mali lwemidiya yabathengi.
Amanqaku akutshanje: IiNdlela eziNtsha kwiNtengiso yeDijithali Emva kweekuki zomntu wesithathu Azisekho
UKirk Enright nguMseki kunye ne-CEO ye Abantu baMandla, iqonga lomthengi ozenzekelayo lokuthengisa kunye neengcali zokuthengisa. Waqala umsebenzi wakhe wokuthengisa kunye nokuthengisa njengomkhupheli kodwa ekugqibeleni waya kwiindima eziphambili kwiintengiso, uphuhliso lomxholo, uphuhliso lwemveliso, ukuthengisa, kunye nokubonisana nolawulo.
Amanqaku akutshanje: Indlela yokukhetha iNkqubo-sikhokelo yaBantu bakho boMthengi
UAleksandra yiCMO e GetResponse, ukhokela intengiso ye-SaaS yehlabathi kunye nokukhula. Eqhutywa lucazululo lwedatha kunye nokuqhekezwa kokukhula, uye waqulunqa amaqhinga akhethekileyo okuya-kwintengiso kwiimpawu zehlabathi (ex-Uber) kunye ne-tech-startups ngokufanayo. Ufumene ishishini lakhe kunye nemfundo yobunkokeli ephumelele kwiMfundo eLawulayo yaseHarvard kunye nesimo sengqondo esiqhutywa yidatha ekuthengisweni kwedatha yesayensi MA eWarsaw. U-Ola uxhasa ngokunyanisekileyo ukuqaliswa kwingingqi ye-CEE, njengomcebisi wezinto ezingenzi nzuzo kunye ne-Google yeenkqubo zokubonisana ze-Startups. Umkhweli we-Amateur, umdlali wepiyano oyi-novice, kunye nomlandeli omkhulu wenkcubeko ekude-yokuqala yokusebenza.
Amanqaku akutshanje: Isikhokelo esiLula sokutsala abaKhokelo bakho bokuqala beDijithali
UMat Darrow yi-CEO kunye nomseki we Vivun, umboneleli wehlabathi jikelele wamava oMthengi (BX) software. UMat yinkokeli yesoftware yeshishini enamava akhulayo amashishini, ukwakha amaqela ehlabathi, kunye nokuhambisa imveliso. Ngaphambi kokuseka iVivun, wayesebenza eZuora, BigMachines, naseDeloitte.
Amanqaku akutshanje: Kutheni i-PreSales ikulungele ukuba nguMnini wamava oMthengi: Ujongo lwangaphakathi kwiVivun
UNicolás Antonio Jiménez ngumnxibelelanisi wentengiso kwiWiden Enterprises, umboneleli weenkonzo zolawulo lweeasethi ezisekwe kwilifu. Unemvelaphi eyahlukeneyo kwezentengiso, ubuntatheli, ulawulo olungenzi nzuzo, inkululeko yokukhuthaza inkululeko kunye nokukhuthaza idemokhrasi.
Amanqaku akutshanje: Yintoni i-Digital Asset Management (DAM) Platform?
UFarah Kim ngumthengisi wemveliso ogxile ebantwini ogxile ekwenzeni lula ulwazi oluntsonkothileyo lube yimibono enokusetyenzwa kubaphulaphuli beshishini. Uyathabatheka kulawulo lwedatha kwaye ujolise ekuncedeni amashishini ukuba anqobe ukungasebenzi kakuhle okubangelwa kukungasebenzi kakuhle kokulawulwa kwedatha.
Amanqaku akutshanje: Intengiso ifuna iDatha esemgangathweni ukuba iqhutywe ngeDatha-Imizabalazo kunye nezisombululo
UDaniel Alvarado yingcali yokuthengisa yedijithali kunye neVP yeTekhnoloji kwi Imidiya ye-White Shark. Unoxanduva lokukhokela iqela labaphuhlisi abakumgangatho wehlabathi emva kwe-White Shark Media's Compass, iqonga lokuThengisa i-All-in-One Sales Enablement yee-Arhente ezijonge ukukala i-Pay-per-Click portfolio yazo. UDaniel uneminyaka engaphezulu kwe-8 yamava esebenza kushishino lweteknoloji yokuthengisa. Unikeze inkxaso zombini kwisicwangciso sokuthengisa kunye nombono wophuhliso lwesoftware kwiindima ezahlukeneyo, kubandakanya uMphathi weDijithali weDijithali, uMyili weSoftware, kunye neVP yeTech. Ngemvelaphi ebanzi yetekhnoloji, uDaniel unceda imibutho isebenzise itekhnoloji ukwenza amava anentsingiselo, ukwenza lula imisebenzi enzima kunye nokuvelisa ixabiso kubaxhasi babo.
Amanqaku akutshanje: Ikhampasi: IZixhobo zokuThengisa zokuThengisa iNtlawulo yeNqakrazo nganye yeeNkonzo zokuThengisa